PhonePe – UPI Payments, Recharges & Money Transfer 3.3.50 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.3.50 လြန္ခဲ့ေသာ2ရက္က
Application မ်ား ေငြေရးေၾကးေရး PhonePe – UPI Payments, Recharges & Money Transfer
PhonePe – UPI Payments, Recharges & Money Transfer ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
PhonePe အိန္ဒိယတွင်မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုစေတဲ့တော်လှန်ရေးသမားနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းဥပဒေကြမ်းငွေပေးချေဖို့အားပြန်သွင်းနိုင်, ငွေလွှဲဖို့ UPI ငွေပေးချေမှုကနေ, သင် PhonePe ပေါ်မှာအားလုံးလုပ်နိုင်ပါတယ်။ PhonePe ကအင်တာနက်ဘဏ်လုပ်ငန်းထက်လမ်း သာ. ကောင်း၏နှငျ့သငျအိန္ဒိယအတွက်အလုံခြုံဆုံးနှင့်အလျင်မြန်ဆုံးအွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုအတွေ့အကြုံကိုပေးထားပါတယ်။
သင် PhonePe app ကိုပေါ်လုပျနိုငျသောအရာတို့ကို -
- အချိန်မရွေး, နေရာမရွေးသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်များထံမှပိုက်ဆံ Send နှင့်တောင်းဆိုရန်။
- အားပြန်သွင်းနိုင်တိုင်းပြည်အနှံ့အရှိဆုံးအဓိကအော်ပရေတာ / Datacard / DTH ဆက်သွယ်မှုများအတွက်မိုဘိုင်း prepaid ။
- အားလုံးအဓိကအော်ပရေတာများအတွက် postpaid landline, Datacard နှင့်မိုဘိုင်းဥပဒေကြမ်းများပေးချေပါ။
- ထိုသို့သောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဥပဒေကြမ်းများအဖြစ် utilities များအတွက်ငွေပေးပါ။
- သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုချိန်ခွင်လျှာ Check အကျိုးခံစားခွင့်နဲ့ save မျိုးစုံဘဏ်စာရင်းစီမံခန့်ခွဲ။
- တစ်ဦးလက်ငင်း၌သင်တို့၏ဘဏ်အကောင့်မှငွေပြန်အမ်းနှင့် cashbacks ရယူပါ။
- Split ကိုဥပဒေကြမ်းများသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်ချက်ချင်းသူတို့ကိုအခြေချ။
- Flipkart, Myntra, Jabong နှင့်အခြားအွန်လိုင်းစျေးဝယ်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာစျေးဝယ်။
PhonePe အကျိုးကျေးဇူးများကို -
- အရောင်းအဝယ်တစ်ကြိမ်လျှင် Rs.1 သိန်းမှ *724 အထိ transaction ။
- သင့် PhonePe ပိုက်ဆံအိတ်သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကုန်သည်များထံမှချက်ချင်းပြန်အမ်းနှင့် cashbacks ရယူပါ။ သင့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်မှဆုတ်ခွာနိုင် -Check ပိုက်ဆံအိတ်ဟန်ချက်။ Cashback မဆိုနှင့်ဆက်စပ်ဘဏ်အကောင့်မှဆုတ်ခွာမရနိုငျနှင့်အခြားအသုံးပြုသူများပြောင်းရွှေ့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ Cashback မိုဘိုင်းအားပြန်သွင်းနိုင်, ဥပဒေကြမ်းငွေပေးချေမှုများအတွက်ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်း, PhonePe တစ်ဦးငွေပေးချေမှု option ကိုအဖြစ်ပေါင်းစည်းထားပြီးဘယ်မှာကုန်သည်ငွေပေးချေမှုများအတွက်သုံးလို့ရနိုင်
- သင့် UPI သုံးပြီးထိပ်တန်းကိုတက်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်မည်သူမဆိုဖို့လက်ငင်းငွေပေးချေစေဘဏ်အကောင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဒက်ဘစ်ကဒ် enabled ။
- ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်သည်မိတ်ဖက်နေရာများတွင်မဆိုမှာသင့်ရဲ့ PhonePe အကောင့်ကို အသုံးပြု. ငွေပေးချေမှု One-click လုပ်ပါ။
- သင့်ရွေးချယ်မှု၏ဘာသာစကားကိုအတွက် transaction ။ အင်္ဂလိပ်, ဟိန္ဒူ, တမီး, ဘင်္ဂါလီ, ဂု, ကန်နာဒါ, Malyalam, ဘင်ျဂါလီ, ဂူဂြာရနှင့်မာရသီယခုအသက်ရှင်နေထိုင်လျက်ရှိသည်။ ပိုများသောဘာသာစကားများမကြာမီလာမည်!
အဆိုပါ PhonePe app ကိုညျ့ဝငွေချေမှု Interface (UPI) ပလက်ဖောင်းအိန္ဒိယအမျိုးသားငွေချေမှုကော်ပိုရေးရှင်း (NPCI) ကဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ဟုတ်သည် Bank က powered ဖြစ်ပါတယ်ကျော်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အဆိုပါ PhonePe UPI app ကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာနဲ့လုံခြုံအားလုံးကိုသင့်ငွေပေးချေမှုနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံ, နှင့်အင်တာနက်ဘဏ်လုပ်ငန်းထက်အများကြီးပိုကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ IFSC codes တွေကိုအကောင့်နံပါတ်များ, သို့မဟုတ်အခြားအဆင်မပြေအသေးစိတ်ကိုမှတ်မိဖို့အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ Virtual ငွေပေးချေမှုရမည့်လိပ်စာ (VPA) - မယ့်မိုဘိုင်းနံပါတ်သို့မဟုတ်တစ်မူထူးခြားတဲ့ငွေပေးချေမှုဝိသေသလက္ခဏာကို အသုံးပြု. ချက်ချင်းဘဏ်လွှဲပြောင်းလုပ်ပါ။
PhonePe သည်လည်းငါတို့ကုန်သည်မိတ်ဖက်ထံမှပိုမိုမြန်ဆန်ပြန်အမ်းနှင့် cashbacks များအတွက်ဒီဂျစ်တယ်မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးပါသည်။ သင်သည်သင်၏ပိုက်ဆံအိတ်ချိန်ခွင်လျှာဖြုန်းသို့မဟုတ်တဦးတည်းအမြန်ပွတ်ဆွဲထဲမှာသင်ချိတ်ဆက်ထားသောဘဏ်အကောင့် (s) ကိုစထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ 70 ကျော်ပေးချေသူ၏နှင့်အတူ, သငျသညျမိုဘိုင်းဖုန်းအဘို့အမြန်ဆန်လွယ်ကူသောအားပြန်သွင်းနိုင်လုပ်နိုင်တဲ့ PhonePe App ကိုအပေါ်အသက်ရှင်နေထိုင် DTH, datacards နှင့်လည်းသဘာဝဓာတ်ငွေ့, လျှပ်စစ်မီး, ကြိုးဖုန်းနှင့်အခြား utility ကိုဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်။
လောလောဆယ် 40 ကျော်ဘဏ်များ UPI ပိုပြီးဘဏ်များမကြာမီလာမယ့်အတူ enabled ကြသည်!
လက်ရှိတွင် UPI အပေါ်ဘဏ်များ: YES ဘဏ် (ကျွန်တော်တို့ရဲ့ UPI စပွန်ဆာ), Allahabad ဘဏ်, Andhra ဘဏ်, ဝင်ရိုးတန်းဘဏ်, Baroda ၏ဘဏ် (Bob), မဟာရပ်ရှဘဏ်, အိန္ဒိယ၏ဘဏ်, Canara ဘဏ်, ကက်သလစ်ဆီးရီးယားဘဏ်, အိန္ဒိယဗဟိုဘဏ်, Citibank မန်စီးတီးပြည်ထောင်စုဘဏ်, ကော်ပိုရေးရှင်းဘဏ်, DCB ဘဏ်, Dena ဘဏ်, ဖက်ဒရယ်ဘဏ်, HDFC ဘဏ်, HSBC ကဘဏ်, ICICI ဘဏ်, IDBI ဘဏ်, IDFC ဘဏ်, Indusind ဘဏ်, အိန္ဒိယဘဏ်, အိန္ဒိယပြည်ပဘဏ်, Karur Vyasa ဘဏ်, Karnataka ဘဏ်, Kotak Mahindra ဘဏ်, Laxmi Vilas ဘဏ်, စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအရှေ့တိုင်းဘဏ်, ပန်ဂျပ်အမျိုးသားဘဏ် (PNB), ပန်ဂျပ်နဲ့ဆင်းဒ်ဘဏ်, Ratnakar ဘဏ် (RBL), အိန္ဒိယပြည်နယ်ဘဏ် (SBI), တောင်ပိုင်းအိန္ဒိယဘဏ် (SIB), Standard Chartered ဘဏ် (SCB ), TJSB Sahakari ဘဏ်, UCO ဘဏ်, အိန္ဒိယယူနိုက်တက်ဘဏ်, အိန္ဒိယပြည်ထောင်စုဘဏ်, Vijaya ဘဏ်
ပိုပြီးအသေးစိတ်အတွက် https://www.phonepe.com မှာကြှနျုပျတို့၏ website သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး
App ကိုနှင့်အကြောင်းပြချက်များအတွက် permissions:
SMS ကို - ဤမှတ်ပုံတင်မဖုန်းကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်ပါသည်
တည်နေရာ - ဤ UPI အရောင်းအဘို့အ NPCI ကလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါသည်
ဆက်သွယ်ရန် - ကျနော်တို့ပိုက်ဆံပေးပို့နှင့်အားသွင်းဖို့နံပါတ်များကိုရွေးချယ်ဖို့အဘို့ဖုန်းနံပါတ်ဤသုံးပါ။
ကင်မရာ - ကျနော်တို့ QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဤသုံးပါ။
သိုလှောင်ခြင်း - ကျနော်တို့ scan ဖတ် QR ကုဒ်ကိုသိမ်းထားဖို့ဒီကိုအသုံးပြုပါ။
Accounts- ဒီတက်လက်မှတ်ထိုးစဉ်ကအီးမေးလ်အိုင်ဒီ prepopulate အသုံးပြုသည်။
Call - ဤတစ်ခုတည်း / vs dual sim ရှာဖွေပြီးအသုံးပြုသူကိုရွေးချယ်ပါစေရန်အသုံးပြုသည်
PhonePe – UPI Payments, Recharges & Money Transfer အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
PhonePe – UPI Payments, Recharges & Money Transfer အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
PhonePe – UPI Payments, Recharges & Money Transfer အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
PhonePe – UPI Payments, Recharges & Money Transfer အား အခ်က္ျပပါ
hfk217 စတိုး 2.4k 12.45M
PhonePe – UPI Payments, Recharges & Money Transfer ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း PhonePe – UPI Payments, Recharges & Money Transfer အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.3.50
ထုတ်လုပ်သူ FXMart Pvt Ltd
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.phonepe.com/en/policy.html
လက်မှတ် SHA1: 4E:50:B6:ED:1A:BA:B9:45:97:68:BF:C0:D9:10:DD:1A:53:16:B9:7F
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Vivek Soneja
အဖွဲ့အစည်း (O): PhonePe
PhonePe – UPI Payments, Recharges & Money Transfer APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ